VPSA ogsijiin Vacuum matoor - Shiinaha Hangzhou Poly Air Qalabka Kala
Mabda 'shaqo VPSA lulid cadaadis matoor oxygen adsorption 1. Tiirarka ugu muhiimsan ee hawada ku jira nitrogen iyo oksijiin. Nitrogen iyo oxygen hawada ay leeyihiin qaab adsorption kala duwan on zeolite (ZMS) Heerkulka (oxygen la nuugo karaa iyada oo nitrogen). Nitrogen on awoodda kelli zeolite adsorption shaandheeyo waa ka wanaagsan yahay oxygen (ra'iyi nitrogen iyo shaandho kelli ciidamo dusha xoog leh), marka cadaadiska hawada ku jira xaalad ah la adsorptio a zeolite kelli adsorbent shaandho ...
Mabda 'shaqo VPSA lulid cadaadis matoor oxygen adsorption
1. Tiirarka ugu muhiimsan ee hawada ku jira nitrogen iyo oksijiin. Nitrogen iyo oxygen hawada ay leeyihiin qaab adsorption kala duwan on zeolite (ZMS) Heerkulka (oxygen la nuugo karaa iyada oo nitrogen). Nitrogen on awoodda kelli zeolite adsorption shaandheeyo waa ka wanaagsan yahay oxygen (ra'iyi nitrogen iyo shaandho kelli ciidamo dusha xoog leh), marka cadaadiska hawada ku jira xaalad ah la kelli sariir zeolite adsorbent shaandho adsorption, nitrogen by adsorption shaandho kelli, ogsijiin yar by adsorption, fiirsashada iyo qulquli wajiga gaaska sariirta adsorption, isa-soociddiisa oxygen iyo nitrogen for oxygen ah. Marka shaandheeyo kelli adsorbs nitrogen in robab, hawada la joojiyo iyo cadaadiska sariirta adsorption waa la dhimay. nitrogen The nuugo shaandheeyo kelli waxaa falanqeeyay iyo shaandheeyo kelli waxaa cusboonaadeen iyo in loo kartaa. ogsijiin si joogto ah laga been abuurtay by wareegaya inta u dhaxaysa laba ama in ka badan sariirood adsorption.
Ujeedadu waxay karaya of ogsijiin iyo nitrogen ku dhow yahay, iyo laba waa ay adag tahay in la kala saaro. Sidaa darteed, qalab adsorption lulid cadaadis oxygen-qaadashada kaliya ee heli kartaa 90-95% oxygen (fiirsashada horjeeda xun ee oxygen waa 95,6%, iyo inta kale waa argon). Marka la barbar dhigo unit-soociddiisa hawada cryogenic, dambaysta ah soo saari kartaa in ka badan 99.5% fiirsashada oxygen.
1. sariirta The adsorption of lulid adsorption warshad Oxygen ee cadaadiska isa-soociddiisa hawada waa ku jira laba talaabo hawlgalka; Adsorption iyo xallinta. Si aad u hesho gaaska wax soo saarka si joogto ah, in ka badan laba sariirood adsorption waxaa sida caadiga ah lagu rakibay qalabka oxygen-qaadashada, iyo qaar ka mid ah tallaabooyinka lagama maarmaanka ah kaabayaal ah ayaa sidoo kale lagu wadaa marka laga eego isticmaalka tamarta iyo xasiloonida baxay. sariirta kasta adsorption guud ahaan in ay dhex maraan tallaabooyin sida adsorption, decompression, faakiyuumka ama cusboonaysiinta decompression, bedelka lagu nadiifiyo iyo xataa kor-karka, iyo xilliyo hawlaha soo noqnoqda. Isla mar ahaantaana, adsorption sariirta kasta waa in tallaabooyinka hawlgalka kala duwan. Under gacanta ugu PLC, hawlgalka dhowr sariiraha adsorption loo agaasimayo karo iyo xeraba in tallaabooyinka wax ku ool ah, si ay qalab cadaadis adsorption lulid habsami ordi karaan iyo aad u hesho gaaska wax soo saarka si joogto ah. Waayo, geedi-soociddiisa dhabta ah, waxyaalo kale oo raad hawada waa in sidoo kale loo tixgeliyo. awoodda adsorption ee carbon dioxide iyo biyaha on adsorbent caadiga ah waa guud ahaan wax badan ka weyn yahay kii nitrogen iyo oxygen, kaas oo laga saari karaa iyadoo la buuxinayo sariirta adsorption la adsorbent ku haboon (ama adsorbent ku oxygen-samaynta laftiisa).
Tirada munaaradaha adsorption looga baahan yahay qalabka wax soo saarka oxygen ku xiran baaxadda wax soo saarka oxygen, waxqabadka adsorbent iyo design-socodka. xasiloonida ee hawlgalka multi-munaaraddii hawlgalka waa mid wanaagsan, laakiin maalgelinta qalabka waa mid yara sare. arrimuhu hadda waa in la isticmaalo sorbent oxygen sare hufan si loo yareeyo tirada munaaradaha adsorption iyo in la isticmaalo muddo gaaban hawlgalka kor u qaadista of unit iyo si loo badbaadiyo maalgashiga intii macquul ah.
1. habka Simple qalabka
2. Heerka wax soo saarka oxygen waa hoos 10000m3 / h, iyo isticmaalka awood u hooseeya iyo maal-yar;
3. Inta ay injineernimada sokeeye uu yar yahay, iyo xilliga rakibidda qalabka way ka gaaban tahay in qalabka cryogenic;
4. kharashka hawlgalka qalabka iyo dayactirka Low;
5. qalab waxay leedahay heerka sare ah qalabaynta hawlgal, sahlan oo degdeg ah in la furo oo ay joojiyaan, iyo tiro yar oo ka shaqeeya;
6. Qalabka wuxuu leeyahay xasiloonida hawlgal xoog leh oo amaanka sare;
7. qalliin fudud, iyo meelaha ugu muhiimsan yihiin oo dhan ka saarayaasha caalami ahaan caan;
8. laga keeno oxygen finjilka kelli qaab ka xoogbadan, iyo nolosha adeeg dheer,
9. dabacsanaan hawl Strong (line load ka xoogbadan, iyo xawaaraha beddelaad dhakhso).
size 1. Product: 100-10000nm3 / h
2. khayroon daahirnimo Oksijiin: 90-94% ama ka sii weyn, kuwaas oo laga beddeli karaa gudahood 30-95% kala duwan sida ay shuruudaha user.
3. Isticmaalka Power of-soo-saarka oxygen: marka khayroon daahirnimo oxygen waa 90%, isticmaalka awood beddelay oxygen saafi ah waa 0.32-0.37kwh / Nm3
cadaadiska 4. Oksijiin: wax ka badan 20kpa (lagugu qasbin karo)
5. Power: ka weyn ama la mid ah 95%
Previous: PSA matoor ogsijiin
Next: ZBN Nitrogendoksid matoor
Automatic Psa Generator ogsijiin ayaad jeceshahay
Compact Medical Psa ogsijiin Generator
Diri Generator ogsijiin
Ogsijiin kala diri Generator xumbo Nano
Generator ogsijiin Home
Generator ogsijiin Warshadaha
Generator ogsijiin Liquid
Generator ogsijiin Waayo dhululubada
Generator ogsijiin Waayo Fish beeraha
Ogsijiin Generator hydrogen
Plant ogsijiin Psa ogsijiin Generator
Generator ogsijiin dadban
Zeolite kelli shaandho ogsijiin Generator